"Bidaartii la igu caayi jiray ayaan geesi ku noqday" - BBC News Somali
"Bidaartii la igu caayi jiray ayaan geesi ku noqday"
Image caption Liliya waxay qirtay in aqbaaladda xaaladdan ay adagtahay
In kabadan 140 milyan oo ruux oo dunida ku nool ayaa qaba cudurka tinta xiiria ee afka qalaad lagu dhaho alopecia.
Waa xaalad iyadoo dadku ay sida kale u caafimaad qabaan ay tintu ka buubto, dib dambena aysan ugu soo bixin.
Mararka qaar timaha oo dhan ayaa ka go'a sida xiiritaanka oo kale, timahaas waxaa ka mid ah suniyaha iyo xattaa xiribaha indhaha.
Liliya Kukushkina-Nugmanova ayaa lagu ciilciilay iskuulka ay dhigan jirtay, cudurkan timaha daadiya oo ku dhacay awgiis.
Muddo ka dib gabadhan waxay hadda caawisaa dadka kale ee xannuun keeda oo kale qaba, iyada oo hawl galisa kooxo caawimaad ka fidiya Ruushka.
"Markay dadku ku arkaan, waxaa ugu horrayn ku soo dhici: 'kansar ayay qabtaa ama caabuq maqaarka ku dhaca." ayay tiri.
"Waxaan u sheegaa in aan qabo xanuun tinta jara oo la dhoho alopecia, dhibna malaha. Ma dhimanayo, waan fiicanahay. mana faafo cudurkan, oo dad kale igama qaadi karaan".
Nin 'xanaaq awgiis xaaskiisa timaha uga xiiray'
Haween timaha laga xiiray kaddib markii ay iska caabiyeen rag doonayay inay kufsadaan
Image caption Liliya waxay caawisaa dadka xanuunkeeda oo kale qaba
Liliya hadda waxay jirtaa 28 sano, waxayna sheegtay in aysan dareemin in ay dadka ka duwan tahay tan intii ay gashaantida ka noqonaysay.
"Khibraddii ugu xumayd waxaan la kulmay markii aan 17 jirka ahaa. Waxaa jiray wiilal iskuulkayga dhigan jiray. Isma aanaan fahmin marka waxay baraha bulshada ka sameeyeen group macno ahaan u dhigma "Nugmanova way xiiran tahay mana anshax fiicna".
"Waxay la noqotay in ay waxyeello ii gaysanayaan. Runtii xoogaa way i dhibtay, laakiin waxaan ogaa in arrintaas aysan shaqsiyadda la xiriirin, oo aysan xiirnidaydu ka dhignayn in aan qof xun ahay.
Liliya waxay qiratay in ay ku adkayd in ay aqbasho sida ay u egtahay, balse nasiib wanaag hadda way faraxsan tahay.
Liliya in ay aqbasho nafteed sannadkan billowgiisii ayuu heer sare gaaray, ka dib markii ay Facebook soo dhigtay qoraal ay dadka kula wadaagayso sida ay ula hardamayso xanuunka haya waxayna qoraalkaas raacisay sawir madaxeedu xiiran yahay oo aysan qabin timo.
Qoraalkaas ayaa durba caan noqday oo dad badan isla wadaageen, dad badan ayaana ka hadlay khibradda ay u leeyihiin xanuunka alopecia.
Intaas ka hor qaar badan oo ka mid ah saaxiibbada Liliya iyo kuwa la shaqeeyaba ma aysan arag timo la'aanteeda, xaaladeedana waxba kalama aysan socon.
Image caption Muddo dheer Liliya waxay isticmaali jirtay timo macmal ah
"Timaha macmalka ah ayaa difaac ii ahaan jira, balse way i xadideen ayay tiri Lilia."
"Dhallinyaro nimadaydii waxyaabo badan ayaa i seegi jiray, aniga oo ka baqaya in ay timuhu iga dhacaan. uma dhawaan jirin leexada casriga ah, kuma dhici jirin dabaal ama mukhuurasho. xataa waxaan aad uga cabsan jiray in aan galmo sameeyo, haddii lamaanahaagu uusan ogayn in aad timo macmal ah qabto timihii macmalka ahaana ay kaa dhacaan iyadoo hawshu dhexda marayso... arrin argagax leh ayay ku noqon kartaa".
Liliya wali marmar bay xirataa timo macmal ah, balse hadda waxay u aragtaa agab xarago ee daruuri uma aragto.
"Haddii aan awoodo in aan yaraantaydii talo isa siiyo waxaan isku dhihi lahaa: "Fadlan naftaada u oggolow maaweelada. Joojina in aad ka walwasho timaha macmalka ah eed qabto".
Si kastaba ha ahaatee dadka ku qanca muuqaalkooda xiirnida ah, waxay wajahaan hadallo aan qalbiga u roonayn oo toos dhagahooda ugu soo dhaca ama dhanka online-ka kaga yimaadda.
Image caption Liliya timo la'aanteeda awgeed ayaa loogu dhibi jiray iskuulka
"Dabcan dadku ma yaqaannaan cudurka alopecia wayna iga cabsadaan. mararka qaarna aad bay u qalafsan yihiin. waxay dhihi karaan uma quruxsanid sidii markaad timaha lahayd." Balse run ahaantii ma rabo in aan dadka ku eedeeyo in aysan aqoon sidii ay ii dhiirigalin lahaayeen. Way wanaagsan tahay haddii ay wanaag ula jeedaan.
Caawinta kuwa kale
Lilia waxay sheegtay in cabsi galinta iyo arrimaha mooraalka ay dhibaato ka haystao carruurta qaba xanuunka alopecia iyo waalidka dhalay, waana taas sababta ay u dooratay in ay caawiso kooxaha arrimahan ku hawlan.
Waxaan ogahay in waalidka dhalay carruurta qaba xanuunka alopecia ay ka cabsadaan in gabdhahoodu ay guur la'aan noqdaan ama aysan helin shaqo fiican. Waxay ka cabsadaan in wiilashooda ciriiri la dareensiiyo ama hoggaamiye ahaan aan loo ixtiraamin.
Image caption Liliya hadda waxay caawisaa kooxaha ka shaqeeya wacyi galinta xanuunkan
Hay'adda qaran ee caafimaadka UK ayaa sheegtay in aysan jirin dawayn 100% ah oo loo hayo xanuunka alopecia.
Liliya ayaa ka digtay in dadku isticmaalaan dawooyinka loogu talagalay in ay caawiyaan dadka timuhu ka go'ayaan iyadoo aan dhakhtar lala tashan.